magaalooyinka ugu badan cudurkaHIV / AIDS ee wadanka Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA magaalooyinka ugu badan cudurkaHIV / AIDS ee wadanka Itoobiya
magaalooyinka ugu badan cudurkaHIV / AIDS ee wadanka Itoobiya
Xafiiska kahortaga iyo xakamaynta cudurka HIV / AIDS-ka ee wadanka itoobiya ayaa sheegay in virus-ka uu ku faafayo 5 dowlad goboleed iyo labo maamul magaalo.
Dawlad goboleedka Gambella ayaa leh cudurka ugu badan oo ah 4.6%, Addis Ababa iyo Diredawa ayaa ku xiga oo leh 3.4% iyo 2.4% siday u kala horreeyaan halka gobolka Canfarta uu ku faafayo 1.4% halka gobolada Tigreega iyo Amxaaraduna ay labaduba qabaan 1.2% cudurka HIV / AIDS
Sida laga soo xigtay WHO, heerka gudbinta ee in ka badan 1 boqolkiiba iyo wixii ka sarreeya waxay u dhigantaa cudur faafa. Si kastaba ha noqotee, faafitaanka Itoobiya ee HIV / AIDS waa 0.93%, ummad ahaan, taasoo la micno ah in cudurku uusan ku faafin heerka faafitaan oo saayid ah.
Heerka bulshada waxaa ku badan dumarka galmada ka ganacsada oo ah 23% iyo 19% dumarka garoobada halka wadayaasha gawaarida xamuulka, shaqaalaha dhismaha iyo dhalinyarada ay ka badan tahay 2%.
Qiyaasta gudbinta ayaa ka sareysa magaalooyinka iyadoo 3% ay ku faafeyso iyo 0.4% meelaha miyiga ah. Waxaa sidoo kale la soo sheegay in heerka faafitaanka ragga uu ka hooseeyo kan dumarka oo 61 boqolkiiba dumarka yihiin, iyo 39 boqolkiiba ragga.
Previous articleJubbaland oo ka hadashey dagaalkii saaka muqdisho
Next articleITOOBIYA OO Si ADag uga hadashey KHILAAFKA suudan iyo Itoobiya sheegteyna in Dibada ka riixayaan dalal shisheeye